Chiitiko: Cross-Channel Kushambadzira Platform | Martech Zone
Chiitiko: Cross-Channel Kushambadzira Platform
Svondo, October 20, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Experian Kushambadzira Services 'muchinjika-chiteshi kushambadzira chikuva inopa masimba mabhureki ekugadzirisa nekuita kudyidzana kwevatengi mukati meimwe sisitimu, mune chaiyo-nguva - kubvisa kudiwa kweakawanda, akaparadzanisa mapuratifomu uye vatengesi vega vega. Ipuratifomu inogonesa mabhenefiti kubatanidza nyore nyore ruzivo rwevatengi kubva kune chero dhata sosi yekugadzira yakangwara, uye inoshanda, kudyidzana kwevatengi kune email, nhare, zvemagariro, webhu, kudhinda uye kuratidza kushambadzira.
Iyo Experian Cross-Channel Kushambadzira Platform Inopa:
Kubatanidzwa kwedata - Wana chokwadi chepanoramic chevatengi vako nekubatanidza data revatengi kubva kune chero sosi, uye nekugadzika ruzivo rweVatengi veKushambadzira
Muchinjikwa-chiteshi mushandirapamwe manejimendi - Pakati peta maneja ese emuchinjikwa-chiteshi mishandirapamwe uye musoni kuendesa akanyanya kuenderana echiratidzo zviitiko kune ako vatengi
Kudyidzana manejimendi - Tora mhinduro dzevatengi vako uye nemanzwiro, ipapo nekukurumidza simbisa iyo data kune akakosha uye akakodzera kusangana kwekuyambuka-chiteshi
Imwe yemapoinzi ayo Experian anoita mune yayo yekuyambuka-chiteshi kushambadzira bhurocha yakakosha… ako vatengi havaone Channels, ivo vanoona imwechete brand. Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekubatanidza kuyedza pamatanho kudzikisira kushomeka, kuziva mutengi chero kwavari, uye utaure navo pachezvako uye nekupihwa zvakaringana hukama hwavo kune rako brand.
Tags: muchinjiko-chiteshikuyambuka-chiteshi kushambadziramuchinjika-chiteshi kushambadzira chikuvanyanzvi
Cardlytics: Bhengi Kadhi-Yakabatanidzwa Kushambadzira
10 Sales Performance Stats Kuti Uzive
Nov 22, 2013 pa1: 55AM
Munguva pfupi yapfuura ndaive ndakaderera zvakanyanya pamari uye zvikwereti zvaindidya kubva kumativi ese! Izvo zvaive KUSVIRA pandakasarudza kuita mari painternet. Ndakaenda ku surveymoneymaker dot net, ndokutanga kuzadza ma surveys emari, uye zvirokwazvo ndanga ndakwanisa kubhadhara zvikwereti zvangu !! Ndiri kufara kwazvo, ndakaita izvi !! Nekushushikana kwese kwemari makore ano, ndinotarisira kuti mese muchazvipa mukana. - vttm
Jan 4, 2014 pa 5: 15 AM
aJ5u - Makore mashoma apfuura ndanga ndakaderera zvakanyanya pamari uye zvikwereti zvaindiuraya kubva kumativi ese! Izvo zvaive Zvakarurama Kusvikira ndadzidza kuburitsa mari .. paInternet! Ndakamhara pane surveymoneymaker point mambure, ndokutanga kuita ongororo dzemari, uye ndichidaro, ndanga ndakwanisa kuita zvinhu zvangu !! Ndiri kufara, kuti ndakaita izvi !!! Nekushushikana kwese kwemari makore ano, ndinotarisira kuti mese muchazvipa mukana. r04O